2016 – Year – Channel Myanmar
The Crown 2016 Season 1 +2+3+4IMDb - 8.7 / 10Rotten Tomatoes - 91%The Crown ဆိုတဲ့ စီရီးဟာ ဘာအကြောင်းလဲ။အဲလိဇဘက် ဘုရင်မကြီး အကြောင်း။ဒါပဲပြောရင်တော့ ပျင်းစရာလို့ ထင်ရတာပေါ့။ဘုရင်မလုပ်ရတာ တကယ်တော့ ပျင်းစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ တွေ့ရမှာပါ။အဲလိဇဘက်ဘုရင်မကြီးဟာ ဝန်ကြီးချုပ် အဆက်ဆက်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူပါ။ဝင်စတန် ချာချီ၊ မက်မီလန်၊ အဲလက်၊ ဝယ်ဆန် စသည်ဖြင့်ပါပဲ။ဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းနဲ့အတူ နိုင်ငံ့ပြဿနာတွေကို အတူဖြေရှင်းခဲ့ရတာပါ။မြူဆိုင်းတဲ့ကပ်ဘေးတွေ၊ စူးအက်တူးမြောင်းလို ကိစ္စတွေ၊သမ္မတ JFK စုံတွဲနဲ့ ကိစ္စတွေ၊ သမ္မတဂျွန်ဆန်နဲ့ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကိစ္စတွေ၊သူလျိုမှုတွေ၊ လိင်အရှုပ်တော်ပုံတွေ အများကြီးပါပဲ။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ ဦးရီးတော်ကလည်း မိန်းမအတွက်နဲ့ နန်းစွန့်ခဲ့ပြီးသစ္စာဖောက်လို ဆက်ဆံခံရတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့ ညီမကလည်း သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ခေတ်ဆန်ဆန်၊ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိပေမယ့် ပြဿနာ မကြာခဏရှာတတ်တဲ့သူပါ။ယူထားတဲ့ယောကျာ်းကလည်း နိုင်ငံခြားဘုရင်မျိုးဆက်နာဇီတွေရဲ့ ယောက်ဖ ဖြစ်နေပြေတော့ အဲလိဇဘက်ရဲ့ ဘဝဟာအရောင်အသွေး စုံလှတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ကြည့်သင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ ဗြိတိန်နန်းသုံးစကားလုံးတွေ နားထောင်နိုင်တယ်၊ဗြိတိန်ရဲ့ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်နဲ့ ဓလေ့တွေကို သိနိုင်တယ်၊သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို ...
The Crown 2016 Season 1 +2+3+ 4
Lucifer Season4+5Lucifer(2019) လူစီဖာ အတွဲ ၄ ကို တင်ပေးနေပါပြီ။ ဒီစီစန်ကိုတော့ နက်ဖလစ်က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၁၀ ပိုင်းရှိပါတယ်။စီစန် ၃ အဆုံးမှာ လူစီဖာရဲ့ ဘဝမှန်ကို ကလိုဝီဒက်ကာက သိသွားခဲ့တာနဲ့ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးရီးကို Fox က cancel ပြီး နက်ဖလစ်ကို ယူဖြစ်သွားတာ ဖန်တွေအတွက် ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်း နဲ့ တိုက်ခိုက်ခန်းတွေ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ၊ ဒိုင်ယာလော့တွေ အကုန်ပိုကောင်းလာသလိုအချိတ်အဆက်တွေနဲ့ ဇာတ်ရှိန်အတက်အကျတွေကလည်း တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်....ဆက်ပြီးအားပေးလိုက်ကြပါဦးအပိုင်း(၁၀) ပိုင်းလုံးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်... Quality – WEB-DL 720pDuration – 50min (@Episode)Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Crime, Drama, Fantasy Translator - LittleneoEncoder – Phyo PyaeSeason4Complete Zip File VIP / Megaup /YoteshinSEASON5Season ...
TMDb: 7.4/10 936 votes
Lucifer Season4+ 5
KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! (2016) Konosuba Season 1 --------------- ထွက်ထားတာကြာပြီဆိုပေမယ့် cmဗားရှင်းအနေနဲ့ မရှိတာရော အတော်လေးလဲရယ်ရပြီးအကြိုက်ဆုံး Animeစီးရီးတခုမလို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့အမြဲတမ်း ကွန်ပြူတာဂိမ်းတွေဆော့ပြီး နေထွက်လိူ့ ထွက်မှန်းတောင် မသိတဲ့ ကာဇူမဟာ နေသာတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ဂိမ်းခွေအသစ်ထွက်၀ယ်တာကနေ စရမှာပါပဲ။ နေသာတဲ့မနက်ခင်းနဲ့ ကာဇူမက တကယ့်ရန်သူလိုပါပဲတနေကုန်ဂိမ်းဆော့ အိမ်တွင်းအောင်းနေတဲ့ ကာဇူမအတွက် နေရောင်က တကယ့်ရန်သူလိုဖြစ်နေတာပေ့ါဗျာ။ဒါနဲ့ သူဂိမ်းဆိုင်ဆီလျှောက်လာရင်း အမြန်လမ်းမပေါ်မှာ လယ်ထွန်စက်တစီးက မောင်းလာတာကို မမြင်တဲ့စကီလေးတဗွေကို တိုက်မိမှာ‌ဆိုးလိူ့ ကယ်မယ်ဆိုပြီး အပြေးမှာ လယ်ထွန်စက်က စကီလေးကိုလဲ မတိုက် သူ့လဲ မတိုက်ပဲသူက အသလွတ်ကြီး လန့်ဖြန့် ရှူးရှူးထွက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ဝိညာဉ်က‌ကောင်းကင်ဘုံတံခါး၀ကိုရောက်သွားပြီး နတ်ဘုရားမလေး Aquaနဲ့‌ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာစပြီး သူ့ဘ၀ဟာ နဂိုတည်းက ဗရမ်းဗတာဖြစါရကြားထဲ နတ်ဘုရားမလေး Aquaနဲ့တွေ့မှငါးပါးပါမှောက်တာကို အတော်လေးခွီ၇အောင် ရေးထားတဲ့ ဇာတ်အိမ်မလို့ စိတ်အပန်းဖြေကြည့်ရအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Translated by : Aung TayzaEncoded and ...
TMDb: 8.8/10 803 votes
Bring It On, Ghost(2016)[စ/ဆုံး] Bring It On, Ghost(2016)ဇာတ်လမ်းတွဲ**********************************(စ/ဆုံး)လူငယ်လေးတစ်ယောက်..သူ့မှာ မွေးရာပါထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်ပါလာတယ်...အဲ့ဒါက သရဲတွေကိုမြင်နေရသလို ဒီသရဲတွေကို ထိတွေ့တိုက်ခိုက်လို့လည်းရတယ်...ဒီလောကကြီးမှာ ကောင်းမွန်တဲ့သရဲတွေရှိသလို လူတွေကို လိုက်လံဒုက္ခပေးနေတဲ့ သရဲဆိုးတွေလည်းရှိနေတော့ ဒီလူငယ်လေးဟာ ခေတ်နဲ့အလိုက်တစ်မျိုးကြံတယ်...သရဲဆိုးတွေကို အခကြေးငွေနဲ့ လိုက်လံနှိမ်နှင်းပညာပေးရင်း စီးပွားရေးလေး တစ်ဘက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေတိုးစေဖို့ကြံရွယ်တယ်....ဒီလိုလိုက်ဗျင်းတဲ့အခါမှာ သူ့ပညာအဆင့်က အငယ်တန်းစားမို့ အစွမ်းနိမ့်သရဲတွေကိုပဲနှိမ်နှင်းနိိုင်တာမို့ သရဲဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်မာလကီးယားပြီးပြန်လာရလေ့ရှိတယ်...ဒါကြောင့် ဝင်ငွေကလည်းထင်သလောက်မရဘူး...ဆိုတော့ သရဲဆိုးတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့သူ့ပညာကို Upgrade လုပ်ရင်း သရဲဆိုးတွေကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့သူထင်မထားဖူးတဲ့ သရဲမလေးနဲ့တွေ့ရင်း နောက်ကွယ်က ထူးဆန်းရှုတ်ထွေးလှတဲ့ ဆိုးယုတ်မှုတွေကို သိလာရတဲ့အခါမှာတော့....ဒီစီးရီးက အပိုင်း(၁၆)ပိုင်းရှိပြီး ရယ်လည်းရယ်ရသလို အက်ရှင်ခန်းတွေလည်း တစ်လှေကြီးပါတယ်..ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းလေးက ဆန်းလှသလို မင်းသားမင်းသမီးကလည်း ချေ့စရာလေးတွေမို့...CM ဖန်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...တစ်ရက်ကို တစ်ပိုင်းနှုန်းတင်ဆက်သွားမှာပါ...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Htet Nandar Aung ပဲဖြစ်ပါတယ်.... Quality –WEB-DL 720 p Duration – 1hr (@Episode)Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : ...
Bring It On, Ghost(2016)[စ/ဆုံး]
My Stupid Cute Husband (2016) တရုတ်မင်းသားချောလေး ယန်ယန်ရဲ့ လူမသိသူမသိ ဇာတ်ကားကောင်းလေးလူမသိသူမသိဆိုလို့ မကောင်းဘူးမထင်ပါနဲ့ ဇာတ်ကားလေးက ကောင်းပါတယ်Eng sub မထွက်လို့ လူသိပ်မသိခဲ့တာပါ။စုစုပေါင်း 25 ပိုင်းထွက်ရှိထားပြီး တရက်ချင်းစီ အမြန်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး ထုံးစံအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ယန်ခမ်(ယန်ယန်) ကအပိုင်း ၁ မှာတင် ဘွဲ့ရပြီး မိဘအိမ်အပြန်လမ်းမှာ တစ်ခါတည်း မိန်းမပါ ယူလာလေရဲ့။သူယူလိုက်တဲ့ ကောင်မလေးကလည်း ဘွဲ့ရကာစလေးပေါ့။မသိရင် နှစ်ယောက်လုံးက အိမ်ပိုင်လို့ ဂေါ်လီရိုက် အဲ လက်ထပ်ကြသလိုလိုနဲ့နှစ်ဖက် မိဘများက တန်းကန့်ကွက်ပါလေရော။ဒီလိုနဲ့ မိဘတွေလက်ခံအောင် “ငါမငယ်တော့ဘူး” ဆိုပြီးသက်သေပြဖို့ကုမ္ပဏီတွေအလုပ်လျှောက်တာပေါ့။ အလုပ်ရတာနဲ့ ယန်ခမ်တစ်ယောက်အကြွေးဝယ်ကတ်တွေကနေ ပိုက်ဆံကြိုထုတ်ပြီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါမိန်းမ မိဘနဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ ဝယ်ပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးလုပ်လိုက်တာဘယ်ပြောကောင်းမလဲ အကြွေးကပိ အလုပ်ကပြုတ်နဲ့ ငါးပါးမှောက်ပါရော။သူယူလိုက်တဲ့ ဇနီးချောလေး လဲ့ရှောင်ထောင် ကြတော့လည်း ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ဇာတ်လမ်းအစတည်းက အဖေ့ပြဿနာရှင်းလိုက် ယောက္ခမကမျက်နှာမြင်ချဉ် အသံကြားခါးပါစေ လို့ ဖြစ်အောင်ကိုနေတာ။ခေသူတော့ဟုတ်ဘူးနော် ဒီလို မျိုးသူကိုမှမင်းသားရော ဒုတိယမင်းသားရောက ကြွေတာဒုတိယမင်းသားကတော့ ...
Uncontrollably Fond ( 2016 ) ( Completed ) ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ 2016 တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလှတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် မင်းသား ကင်ဝူဘင်နဲ့ ဆူဇီတို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး On Going လွှင့်နေတုန်းကလည်း ကြည့်ရှုသူပရိတ်သတ်တို့ရဲ့တမ်းတမ်းစွဲအချစ်တော်လေးဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် အညွန်းကတော့ရှင်းဂျွန်ယောင်းနဲ့ နိုရယ် ဟာ လူငယ်ဘဝမှာကတည်းက ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူ၂ဦးပါ..ဒါပေမယ့်လည်းအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့လည်း လမ်းခွဲခဲ့ကြရတာပေါ့နှစ်တွေကြာပီးတဲ့နောက်မှာ ရှင်းဂျွန်ယောင်းဟာ ကိုရီးယားရဲ့ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်..နိုရယ်ကတော့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်..အရင်တုန်းက ကံမဆုံခဲ့လို့ ကွဲကြရပေမယ့်အခုကံ အ ကြောင်းဖန်လာပြန်တော့ ဒီ၂ယောက်ကို ကံကြမ္မာက နောက် တခေါာက်ထပ်ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပြန်တယ်..ဒီလိုနဲ့မငြိမ်းသေးတဲ့အချစ်မီးတွေနဲ့အတူ၂ယောက်သား ပြန်လည်ဆုံတွေ့မှုကနေ တဆင့် ဘယ်လိုအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပြန်လည်ပေါက်ဖွားလာမယ်ဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင် Subtitle Credit To Somonlian ( Subscene ) Episode 1 - YuuDrive / Yoteshin / MegaUp / Yandex / Episode2- YuuDrive / Yoteshin / MegaUp / Yandex / Episode ...
Uncontrollably Fond ( 2016 ) ( Completed )